hadey hadaladaan kugu tiraahdo wey qooqan tahaye ogoow ninyahow - iftineducation.com
iftineducation.com – hadey hadaladaan kugu tiraahdo wey qooqan tahaye ogoow ninyahow
Maxay u jecel yihiin naagaha garoobka ah dhowmada badan?
dad badan ayaa waxay isweydiiyaan “naagta garoobta miyay ka qooq badan tahay midda aan waligeeda nin guursanin“?, hadaba waxaad ogaataa qooqa waa dabeecad ay naagta ku dhalato.
Way kala daran yihiin dumarka, garoob iyo gabar caato iyo shilis ma kala laha, waxaad arkaysaa naag gabar oo aan qooq iyo kacsi la seexan karin, sidoo kale waxaad la kulmaysaa naag gabaroob tacbaan ah jirkeeda aad u qabow, cagsigana waa la arkaa garoob oo aan la hayn karin iyo gabar tacbaan ah oo gusba aan ogolayn.
Waxaa kaloo aad aduunka ku arkaysaa naag caato oo gus ka dhargaynin, iyo naag buuran oo geedba arki karin, marka sheekada dhalashada ayay ku xiran tahay.
Fircooni iyo sunina waa sidaas,
immisa gabar fircooni u gudan oo hadana raaxada ku daran oo siilkooda furan mar walba, kulayl iyo dhacaan leh, habeen iyo maalinba, marka ninka raadinayo naag kacsi badan ama gabar qooq badan nasiibkaaga sug.
Lama dhihi karo midaan ayaa qooq badan ama tan ayaa daciif ah, qurux iyo qooq shaqo iskuma laha, naag qurux badan ma aha inay kacsi daran leedahay sidoo kale naag foolxun inay eber tahay.